Soomaaliya oo ka qeyb galeyso shir looga hadlayo tamarta cadceeda oo Dubai ka dhacaya - Halbeeg News
Soomaaliya oo ka qeyb galeyso shir looga hadlayo tamarta cadceeda oo Dubai ka dhacaya
ABU DHABI (HALBEEG)- Wafdi uu hogaaminayo Wasiir ku Xigeenka ahna Sii hayaha Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Cusmaan Libaax Ibraahim ayaa gaaray magaalada Dubai ee dalka isu tagga Imaaraadka Carabta.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Hay’adda Tamarta ee magaceeda loo soo gaabiyo IRENA oo fadhigeedu yahay magaalada Abuu Dubai ee dallka Imaaradka ayaa diirada lagu saarayaa Tamarta cadceedda laga dhaliyo ama Solarka iyo looga faa’ideysan lahaa.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha dalka Mudane Cismaan Libaax Ibraahiim oo furitaanka shirka hadal kooban ka jeediyay ayaa ka hadlay muhiimada Soomaaliya ay u leedahay korantada laga dhaliyo Cadeeda.
“Waxaan xoogga saarnaa sidii aan dalkeena oo cadeediisa ay wanaagsan tahay aan uga faa’iideysan lahayn,waxaan hay’addan IRENA oo uu dalkeenu xubin ka yahay uga mahadcelinayaan sida ay arrimahan ugala shaqeenayso Soomaaliya, anigana waxaan naga go’an sidii aan u dar dargelin lahayn arrimaha tamarta” ayuu yari Wasiir Libaax.
Wasiirka ayaa dalka Imaaradka uga qeybgalayo Shirka Tamarta ee sanad laha ah ee dowladda Imaraadka ay qabto kaas oo ay ka qeybgalayaan xubna ka socda Dowladda Carabta, Afrikaan, iyo hayadaha caalamka ee ka Shaqeeya Arrimahan Tamarta iyo sida looga faa’iideysan karo.